October 4, 2020 - Online Hartha
ဆနျတို့ ဆားတို့ လုံးဝ မပါသော မိုငျးဖုနျးဆရာတျော ဘုရားကွီး ၏ မတ်ေတာစာပါ သူတျောကောငျးတို့
October 4, 2020 by Online Hartha
ဆန်တို့ _ဆားတို့ လုံးဝမပါသော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ မေတ္တာစာပါ သူတော်ကောင်းတို့ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၄ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (ယွန်းဂိုဏ်ပြက္ခဒိန်)၊ တော်သလင်းလပြည့် (မြန်မာပြက္ခဒိန်) (၁၊ ၁၀၊ ၂၀၂၀) အရညဝါဒီ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ တပည့်ဒကာများအား သိရှိရန် ပေးပို့သော မေတ္တာစာ- နှာ (၁) မိုင်းကျက်ဂူမှာ ဆရာတော်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကာ ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် တရားဘာဝနာ အားထုတ်လျက်ပါ။ တောတောင်သဘာဝနဲ့အတူ အေးချမ်းလှပါတယ်။ တောကြက်၊ ဂျီ၊ မျောက်၊ ကျားသစ်လေး၊ တောကြောင် စတဲ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန်တွေ ဂူမှာ လာရောက်ကျက်စားပါတယ်။ ညနေပိုင်း ဥဒေါင်းတွန်သံတွေ ညံနေသလို မြွေလည်း ဂူထဲမှာ လာအိပ်ပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း သူတို့တတွေကို ရင်ဝယ်သားလို မေတ္တာထားပါတယ်။ ဂူရှေ့မှာလည်း ငှက်ကလေးတွေ ကျီးတွေကို အစာကြွေးပါတယ်။ သတ္တဝါတိုင်း ဝမ်းရေးအတွက် … Read more
မိခင်အပေါ် ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း
မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း မင်္ဂလာဦးညတွင်မင်္ဂလာဦးမောင်နှံအတွက် ညစာစားဖို့လင်ဗန်းအကြီးတစ်ခု၌ အလွန်ကောင်းပြီးအနံ့ အရသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသုံးဖို့အခန်းတစ်ခုမှာအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ သတို့သားက သတို့သမီးကိုစားသောက်ဖို့ခေါ်တော့ သတို့သမီးကမေးတယ်….ရှင့်အမေကော မစားဘူးလား.…?ခေါ်လိုက်ပါ အတူတူ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စားလိုက်ကြရအောင် …. သတို့သားက အမေ အိပ်သွားပြီးထားလိုက်ပါ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ စားလိုက်ကြရအောင်…ဇနီးက ထပ်ပြောတယ်။ ကျွန်မသိတယ်ရှင့်အမေလည်း ထမင်း မစားရသေးဘူးခေါ်လိုက်ပါ အတူစားရအောင်ပြောတော့..အိပ်ပါစေ ထားလိုက်ပါကွာဟုပြောတယ်။ ထိုအခါ သတို့သမီးက ထပ်ဖန်တလဲလဲအမေကိုခေါ်ဖို့ ပြောပေမယ့်သတို့သားကလည်း ထပ်ဖန်တလဲလဲ ငြင်းဆိုရာကနေနောက်ဆုံး သတို့သမီးက သူမကိုကွာရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သားအချင်းများရာကနေကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုက်ကြတဲ့အခြေသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့တယ်။ လမ်းခွဲကြပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးဟာကိုယ်စီ နောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်လိုက်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးက သူမရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေတယ်…။နှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ သူမက နေရပ်ကိုပြန်လာတော့သားသမီးတွေကလာရောက်ကြိုဆိုကြပြီး အိမ်ပြန်လာကြတယ်။ လမ်းခုလတ်တနေရာမှာလူတစ်ယောက်ဟာဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ဆင်လျက် အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာတောင်းရမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ အမျိုးသမီးက … Read more
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးပြောပြတဲ့ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း…
ဆရာတော် ဘုရားကြီးပြောပြတဲ့ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း… အိမ်ရှိလျှင် အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲ။ သူ့ စုတ်ထိုးသံ ကြား ရတတ်စမြဲ။ အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကိုလည်း လူတွေ အတိတ်ကောက်ကြလေ့ ရှိတတ်ကြရဲ့။ ဘာကြောင့် အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးပါသလဲ။ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုးခြင်းဟာ နတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတတ်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီး ဆရာ နဲ့ တပည့် လင်နဲ့မယား ဆက်ဆံရေးမှာ လိုက်လျောမှု မရှိခဲ့လျှင် တကျက်ကျက်ဖြစ်ပြီး ကျက်သရေမင်္ဂလာလည်း ပျက်တတ်တယ် ဆိုပါတယ်။ “ကိုယ်စောင့်နတ် အိမ်စောင့်နတ်တွေ နားမခံသာ။ ကံထိန်းနတ် ဥစ္စာစောင့်နတ်တွေ လည်း နားမခံသာ။ နတ်တို့ နားမခံသာလို့ရှောင်သွားမည်။ သို့မဟုတ် လက်ပိုက်ကြည့်နေမည် ဆိုပါက အဲဒီအိမ် စီးပွားမတတ် နေသမျှ လူစိတ်မအေးရ လာသမျှ ဧည့်မ … Read more
ခုလို ကာလကြီးမှာ စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၆)မျိုး
ခုလို ကာလကြီးမှာ စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၆)မျိုး ခုလို ကိုဗစ် ကာလ မှာတော့ လူတိုင်းလိုလို အနည်းနဲ့ အများ စိတ်ဖီစီးမှုတွေ ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ ကိုဗစ် ရဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ကြောင့် စီးပွားေ ရးဘက်မှာ ထိခိုက်န စ်နာမှုတွေ ရှိ နေ သလို တစ်ဖက်မှာလည်း ကျန်းမာရေး အတွက် စိုးရိမ် ပူပန် နေရတဲ့ ဒုက္ခ ကလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊စိုးရိမ် ကြောင့်ကြ မှုေ တွကို လျော့ ပါး သက်သာ စေဖို့ ဒီနည်းလမ်းေ လးတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒီအ … Read more
မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီး လည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း ရဲ့ဆိုလိုရင်း
မြဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ သစ်ပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကွဲစနေဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကွီး သုံးခွနျး အဓိပ်ပါယျ ရှစေကားကွီး သုံးခှနျး ၁ ။ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ ၂ ။ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ ၃ ။ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့ ကွားတော့ ကွားဖူး၏ သို့သျော တှငျတှငျ ကယျြကယျြ သိသူတော့ ရှား၏ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ မွဈကွီးလညျး မခမျးပါစနေဲ့ ဆိုတာ ကွညျလငျ အေးမွတဲ့ တသှငျသှငျစီဆငျးနတေဲ့ မွဈကွီးနဲ့တူတဲ့ … မတ်ေတာတရားမြား လူသားတှမှော မခမျးခွောကျပါစနေဲ့ .. လို့. ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏ ၊ လူသား အခငျြးခငျြး ဆှမြေိုး မိတျသင်ျဂဟအခငျြးခငျြး မတ်ေတာထားပွီး နထေိုငျကွမယျ ..အားလုံးသော … Read more
(၇) ရကျသားသမီးမြားအတှကျ (၄.၁၀.၂၀) မှ (၁၀.၁၀.၂၀) ရကျနေ့ အထိ တဈပတျစာဟောစာတမျး
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၄.၁၀.၂၀) မှ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက် ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ.. Sunday Monday Tuesday Wednestday Thursday Friday Satday Sir Min Thein Kha Unicode Version (၇) ရကျသားသမီးမြားအတှကျ (၄.၁၀.၂၀) မှ (၁၀.၁၀.၂၀) ရကျ ရကျနအေ့ထိတဈပတျစာဟောစာတမျး အားလုံး ဖတျရှုနိုငျရနျ ရှယျပေးနိုငျပါတယျ.. ဗဒေငျ ဟောကိနျးမြားသညျ ဆရာကွီး မငျးသိင်ျခ၏ ပညာရပျအတိုငျး တှကျခကျြထားခွငျး ဖွဈပါသညျ.. စိတျခမျြးသာခွငျး … Read more